Useyilungele Impucuzeko – Maskandi Media
Usemi ngomumo umfoka Mpungose. Lo mculi osanda kugila izimanga emela indima yalo mculi kuma awards amakhu enhlangano yebhola lezinyawo kuleli, uthi noma ngabe sekukusasa.
“Ngicabanga ukuthi kwangisiza kakhulu ukuyodlala kuma awards ebhola lezinyawo ngoba umsebenzi wami weMpucuzeko wenzeka kalula manje”.
“Ngizwa nginokubadabukela laba abathi bazokwazi ukumelana nami kulo live engifuna ukuyobhubhisa ngawo laphana. Mfoka Mcineka zidedele ndoda ziqhuthane amakhizane ngoba kade zafunana. Uyabona kulokhu ngifuna kujaje ngisho encane ingane ngoba vele ngeke bengenze lutho ngokuba nabalandeli abaningi”.
“Yayisho uma seknjenake Indidane ithi ‘Abazame okunyeee, Ehe!’. Nami ngisho njalo ke manje qhawe lami ngithi la owangibeka khona kuyashisa kodwa nginawo futhi maningi amanzi okucisha lowo mlilo. KwiMpucuzeko kuzocaca ngoba ngiyezwa kunendoda engifuna iqhude”.
“Angisho kabi kodwa ngithi nongayidli inja uyolala eyidlile ngempelake kulokhu ngoba angithetheleli ngishaya ingoma kuphela plus ngiyazizwa ngivuthiwe ku-live”.
Lo mculi onokuzethemba okungaka uwasho lamazwi nje, akazibekile neze phansi umkhaya wakhe uKhangelani umfoka Mhlongo njengoba ecije ezinjjo nje ethi kokhetha ukhethi kwiMpucuzeko mhlaka 201 July 2019. Unxuse abathandi bomculo wakhe ukuthi begqoke bezimisele ukuze kucace ukuthi lento ingeyakhe wayinikwa abalele.
“Nginesicelo esincane nje engifisa ukusidlulisa kubahlei bomcimbi oMcineka nethimba lakhe. Kulonyaka ngicela bebhekisise. Angisho ukuthi ababhekisisi kule eminye iminyaka kodwa ngizwa ngisindwa isicoco nje ngathi iyolala eShobalenyathi le ndondo enkulukazi yendebe yomhlaba endimeni kaMaskandi. Mina njengesilo ngithi ayigubhe ibheke khona”. Kubeka uDSD.
Previous Previous post: Uzele ingoma uMdumazi
Next Next post: Inqamula mazwe ekaSjava